Taliyaha cusub ee Ciidamada AMISOM oo Sheegay in uu xoojin doono dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab – Walaal24 Newss
February 2, 2018	0	By walaal24
Taliyaha cusub ee Ciidamada Howlgalka Midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya Jim Beesigye Owoyesigire ayaa si rasmi ah Xafiiska kagala wareegay Taliyihii hore ee Ciidamada AMISOM General Osman Nuur Subagle oo tan iyo bishii July sanadkii 2016-kii xilkaasi hayay.
Taliyaha cusub ee Ciidanka AMISOM Jim Beesigye Owoyesigire ayaa balan qaaday inuu meesha ka sii wadayo howsha horay loo bilaabay,wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu xoogga saari doono dhisida awoodda Ciidamada Qaranka Soomaaliya.
General Owesiliile oo leh Qibrad ciidan oo 39-sano ay ayaa u horseeday Ciidamada Difaaca Uganda iney helaan Aqoon iyo qibrad Ciidan,isagoo xilal kala duwan oo dhanka ciidan ah ka soo qabtay dalka Uganda oo ay ka mid tahay u adeegida Ciidamada Uganda gaar ahaan Taliyaha Ciidamada Cirka Uganda iyo Jagooyin kale.
Sidoo kale,Taliyaha Cusub ee Ciidamada AMISOM Soomaaliya Jim Beesigye Owoyesigire ayaa sheegay inuu mudnaanta koowaad siin doono xaaladda kala guurka ah,sida Xaaladda Ku-meel-gaarka ah ee Guud ahaan Amniga loogu wareejinayo Ciidamada Qaranka Soomaaliya iyo bur burinta goobaha ay ku hareen Kooxda Argagixisada Al-Shabaab oo xiriir la leh Shabakada Al-Qaa’ida.
“Dhammaanteenba halkaan waxaa nagu heysata hal dhibaato,waana Al-Shabaab. Uma baahnin inaan ku biirno Al Shabaab. Waxaan u baahanahay inaan la dagaalanno, jebino laf-dhabartooda kadibna ugu dambeyn cidhibtirno. Taasi waa Ujeedkeena waan ku guuleysan doonaa, “Sidaasi ayuu balan qaaday Taliyaha Cusub ee Ciidamada AMISOM.
Goobta Xil wareejinta ka dhaceysay oo ahayd xarunta Taliska AMISOM ee Xalane waxaa goob joog ahaa Wakiilka gaarka ah ee Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Howlgalka AMISOM Francisco Caetano Madeira.
Amb; Francisco Caetano Madeira ayaa Yiri “Waxaan doonayaa in dunidu ay ogaato in aanu helnay Sarkaal Cajiib ah, askari aad u sarreeya, Sarkaal ka tirsan ciidamada oo awooda inuu xilkiisa si daacadnimo ah u guto, si ay ku jirto dabeecad wanaag, kana gudbi kara xaalado aad u adag.
Wuxuuna ugu danbeyntii soo dhoweeyay Taliyaha Cusub ee Ciidamada Midowga Africa AMISOM ee Soomaaliya,isagoona u balan qaaday inuu si hufan oo xilkasnimo ku jirto ula shaqeyn doono.
Ugu danbeyntii,Taliyihii hore ee Ciidamada AMISOM Generaal Osmaan Nuur Subagle ayaa ugu baaqay dhamaan Saraakiisha Ciidamada AMSIOM iney la shaqeeyaan taliyaha cusub una taageeraan sidii horay isaga ugu garab. istaageen shaqadiisa.
Shirka Goloha Wasiiradda oo looga hadlay Sharciga Shirkadaha, Amniga dalka iyo arrimo kale
Wasiirka Arimaha Dibabada oo kulan la yeeshay Safiirka Imaraadka u fadhiya Soomaaliya
Sawiro: Ciidamada Amaanka ee Dowladda Fedaraalka oo gacanta ku dhigay Rag dilal qorsheysan ka fuliyey magalada Muqdisho
Ciidamada Xoogga dalka oo fashiliyay Qarax gaari oo la doonayay in lagu dhibaateeyo Shacabka
Madaxweynaha JFS oo dhiggiisa Eretrea kusoo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho